Botnet Inffection: Inona no Fantatrao Amin'io Lohahevitra io? & Ndash; Torohevitra sy toro-hevitra
Botnet Inffection: Inona no Fantatrao Amin'io Lohahevitra io? - Torohevitra sy toro-hevitra
Ny botnet, fantatra amin'ny anarana hoe tambajotra bot na tafika zombie, dia tambajotra lehibe amin'ny solosaina marary. Misintona ireo solosaina ireo ny malware ary manompa ireo mpanafika. Miezaka mifehy azy ireo amin'ny solosaina an-jatony sy an-jatony izy ireo, ary ny botnets dia ampiasaina amin'ny fandefasana spam, viriosy ary malware amin'ny fikambanana. Manampy koa izy ireo ny mangalatra ny fampahalalana manokana sy ny fametrahana ny fanafihana DDoS. Manambara i Jack Miller, Semalt Mpitarika Success Success Manager, fa ny botnets dia heverina ho iray amin'ireo fandrahonana goavana amin'ny aterineto ary tokony hofoanana haingana araka izay azo atao.
Aiza no misy ny botnets?
Mba hahatonga ny botnet, ny ordinatera dia tokony ho tratry ny aretina na viriosy manokana izay hiantefan'ny serivisy remover na solosaina hafa ao anaty tambazotra iray. Tian'izy ireo ny mifehy ny fitaovana ampiasainao ary ampiasaina handefa torolàlana avy amin'ireo mpikiravira mba hanatanterahana ny asany manokana. Ny mpikirakira sy ny mpanao heloka bevava dia manala ny solon'anarana, tenimiafina ary fampahalalana hafa miaraka amin'ny fanampiana amin'ny botnets. Tsy misy fahasamihafan'ny aretina malaza nentim-paharazana ny aretin'ny bakteria botnet.
Ahoana no ahafantarantsika ny botnets?
Azontsika atao ny mamantatra ny botnets rehefa simika ny ordinatera na ny fitaovana finday toy izany. Ny famantarana mampiseho fa voan'ny aretina ny ordinateranao, dia ny fihenan'ny ordinateranao, ny mailaka hafahafa, ny hetsika hafahafa, ny hafatra diso, ary ny rakitra izay tsy afaka misokatra tsara. Ireo no soritr'aretina mety hitranga amin'ny olona iray hangalarana ny angon-drakitrao sy ny fanesorana ny ordinateranao amin'ny alàlan'ny tambajotra bot. Raha toa ka mihena ny rafitry ny ordinateranao dia mety ho lasibatry ny botnet ianao.
Ahoana no hamonjena ny ordinatera avy amin'ny botnets?
Afaka manaisotra ny solosaintsika amin'ny tamba-jiro botnety isika amin'ny alàlan'ny fametrahana programa anti-malaza na antibiotika izay afaka manala ny bots amin'ny fitaovantsika araka izay tratra. Ny fomba tsara indrindra dia ny fanaovana scan antivirus amin'ny ordinatera matetika. Azonao atao ihany koa ny manandrana ireo fitaovana manohitra ny botneta izay manala ny malware avy hatrany amin'ny rafitrao.
Ny fomba tsara sy mora natao mba hisorohana ny fahosan'ny botnet:
Tokony hametraka programa antoky fahatokisana sy matanjaka ao amin'ny ordinateranao na ny fitaovana findainao
Tokony hametraka ny rindrambaiko rindrambaiko
Tokony hitandrina ianao rehefa manokatra na tsindrio zavatra ao amin'ny Internet
Mba hiarovana ny solosaina tsy ho lasa zombie ao amin'ny tafika botnet, tokony hiala amin'ny famoahana programa sy rakitra mampiahiahy. Plus, tsy tokony hikirakirana ny rohy tsy fantatra na ny fanalahidy mailaka tsy fantatrao ianao. Tadidio mandrakariva fa ireo zavatra rehetra ireo dia afaka misambotra bots ary misy eo amin'ny fitaovam-pitaovana ataonao. Ankoatr'izay, tokony hitazona ny browser, ny fikandrana, ary ny programa Antivirus ianao, ary hijery ny kalitao sy ny fanavaozana ny pataloha fiarovana anao. Arovy ny fitaovana ampiasainao amin'ny programa mahery vaika Antivirus, toy ny software Avast Antivirus. Manampy amin'ny fisorohana ny ordinatera na ny fitaovana finday tsy ho tratry ny aretina, botnets ary viriosy Source .